दशैं तिहार भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला ! दशैं तिहार भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला ! Canada Nepal
दशैं तिहार भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला !
दशैं तिहार त हो नी भनेर जथाभावी खाँदा र आवश्यक भन्दा बढी खाँदा यो बेला धेरै मानिस बिरामी पर्छन । अझ कतिपयले त यो दसैंमा खाने हो भनेर महिनौंदेखि खानेकुरा जोहो गरेर राखेका हुन्छ । यस्ता खानेकुराबाट फूड पोइजनिङको जोखिम उच्च हुने गरेको छ ।
फुड पोइजनिङकाट बच्न खानालाई सफा गरेर राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। खाना बनाउनुअघि, खानु र खुवाउनुअघि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। पकाएका खानेकुराहरु छोपेर राख्ननुपर्छ भने एकैपटक धेरै खानेकुरा खानु हुँदैन् । प्याकेजिङ खाना, केमिकलयुक्त खानेकुरा सकेसम्म नखाएको राम्रो । फुड पोइजनले दीर्घकालीन असर नगरेता पनि यसले स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक असर पुर्याउछ। (न्युज कारखाना)
आश्विन २८, २०७८ बिहिवार २०:१९:१० बजे : प्रकाशित